Ny transposh.org Plugin WordPress seho manokana sy ny fanohanana toerana
Version 0.5.3 – Fahaizana mandika URLs
Jona 1, 2010 amin'ny tolotra 44 Comments
Io dikan vaovao mamela URLs eo amin'ny toerana tokony nadika ho teny nomena nokendrena. Te hisaotra Hans avy Cosmedia (ny vohikala momba ny fandidiana sy ny fitsaboana tarehy) fa fanohanana ny asa natao tamin'ny endri-javatra ity, ary koa ny fanohanana ny Patch ho fanohanana ny fomba amam-panao permalinks plugin. Raha tsy ampy ny endri-javatra, mamorona tapakila ho antsika amin'ny fampandrosoana Ho toerana ary manampy izany ny todo list. Raha te-hanampy antsika, fanohanana ny fampandrosoana endri-javatra dia hanampy antsika hanao izany hitranga haingana kokoa, ary ny fiaraha-monina mba hahazo vokatra feno kokoa.
Misy ihany koa ny fanatsarana bebe kokoa tafiditra toy ny hoe fanehoan-kevitra atao amin'ny fiteny izay hafa noho ny toerana misy anao dia marika iray ho toy izany, ka ho lasa any amin'ny toerana misy anao translatable teny (tokony mba hanamarihana ny toerana misy anao handika teny ao amin'ny toe-javatra safidy), tsara kokoa fanohanana for wordpress Super cache plugin, ary kely fanavaozana ao amin'ny jQueryUI dikan ampiasaina izay manampy amin'ny WordPress 3.0 avy fanohanana.
Last zavatra momba Zavatra fandaharam-potoana dia ny hoe tianay ho fantatrareo fa manana ny pejy eo amin'ny fampandrosoana toerana izay foana antoko fahatelo Plugins mifanentana list (amin'ny tampina aza raha ilaina). On ny Wiki plugin fanohanana matrix pejy, toy ny ny wiki, mamorona fotsiny ny mpampiasa ny vohikala ary aza misalasala ny manova ary manatsara izany.
Nametraka Under: General Messages Tagged Miaraka: fanomezana, tsy ampy taona, fanafahana, IZAO, Trac, WordPress 3.0, WP-Super-cache
Version 0.4.0 – Sambatra integrations vaovao
Janoary 1, 2010 amin'ny tolotra 25 Comments
Io dia manome dika vaovao integrations amin'ny roa malaza indrindra WordPress Plugins. Ny voalohany, Google-XML-sitemaps dia manome fomba iray hamorona sitemaps mba hampiasaina amin'ny Google sy Google Webmaster fitaovana, ny fampidirana miteraka ho an'ny tsirairay ao amin'ny sitemaps Url URLs fanampiny ho an'ny voadika pejy. Mila ity fampidirana tsotra damba mba ho atao eo amin'ny tany am-boalohany plugin, vakio ny fomba ao amin'ny FAQ, na mifandraisa antsika handray ny nitampintampina rakitra. Manantena izahay fa ho avy dikan ny Google-XML-sitemaps dia ahitana damba ity ny Default.
Ny faharoa dia ny fampidirana WP-Super-cache izay manome ny caching rafitra ho an'ny WordPress, plugin io dia tsy ho ny ketraka ny fo sy manome caching mahery rafitra ho takalon'ny taonina ny olana eny an-dalana, fametrahana ny mafy sy sarotra kokoa aza fampidirana. Na izany aza, fampidirana io dia manome mpampiasa plugin io fiovana tsotra izay hamafa ny Voatakona pejy amin'ny fandikan-teny ny asa, misakana izany teny tsy hitranga fotoana maro sy avy amin'ny mpampiasa mba mahita tsy nadika afa-po (ary ao ny raharaha ny Auto-teny, ny fandikana indray ary indray).
Raha tianao kokoa ny Plugins fidirana amin'ny, ary manana hevitra ny fomba (ary angamba ny sasany kaody), Mitete taratasy kely fotsiny eto. Ary Eny – folo taona vaovao sambatra ho antsika rehetra!
Update 2010/1/3 – Toa nisy ny fahadisoana tamin'ny damba toromarika, toromarika vaovao no Nohavaozina ity toerana fizarana FAQ (misaotra myatus). Ny damba koa ho mivantana alaina avy amin'io rohy : Sitemap-fototry-322-nitampintampina
Nametraka Under: Release filazana Tagged Miaraka: Google-XML-sitemaps, tsy ampy taona, fanafahana, WordPress plugin, WP-Super-cache
Tianay ny hisaotra ny mpanohana!
Mampifandray hetra: vola madinika, hajia, eny mihoatra!
Nisy hadisoana no nitranga, izay angamba midika hoe ny fahana dia nidina. Andramo indray taty aoriana.
Vidyut amin'ny Version 1.0.2 – Lazao amiko izay misy anao avy ary Izaho hanao…
tolotra amin'ny Version 1.0.0 – Tonga ny fotoana
tolotra amin'ny Version 1.0.1 – ny gadget, ny alehanao
Olivier amin'ny Version 1.0.2 – Lazao amiko izay misy anao avy ary Izaho hanao…
MIVOAKA amin'ny Version 1.0.1 – ny gadget, ny alehanao
0.7 APC nomaniny ho solon'izay fanompoana Bing (MSN) mpandika teny andro nahaterahan'i buddypress bugfix fanaraha-maso foibe CSS sprites nanome fandikan-teny fanomezana eaccelarator Facebook sandoka tafa sy dinika saina sprites gettext Google-XML-sitemaps dikanteny google resadresaka jquery lehibe tsy ampy taona fiteny maro parser fanafahana replytocom RSS fikarohana securityfix IZAO ara-tsosialy hafainganam-pandeha enhancements nanomboka Trac amin'ny twitter UI Video anaty filatron-dahatsoratra wordpress.org WordPress 2.8 WordPress 2.9 WordPress 3.0 WordPress plugin WP-Super-cache xcache
Entries (RSS) ary Comments (RSS)